DAAWO: RW Rooble oo kulankii u dambeeyay maanta la yeeshay Golaha Wasiirada XFS – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: RW Rooble oo kulankii u dambeeyay maanta la yeeshay Golaha Wasiirada XFS
June 21, 2022 Xuseen 5
Ra’iisul Wasaaraha Xafiiska ka sii tagaya ee XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyay Golahiisa Wasiirrada iyo howl wadeennada Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha sidii wanaagsaneyd ee ay ula shaqeeyeen iyo howlihii baaxadda lahaa ee ay dalka u soo qabteen.
Ra’iis Wasaare Rooble ayaa wasiirrada u rajeeyay mustaqbal siyaasadeed wanaagsan, isagoo kula dardaarmay in ay qof waliba intii karaankiisa ah dalka ugu adeego.
Dhanka kale Xubnihii Golaha Wasiirrada ee kulanka ka hadlay ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga mahadceliyay sidii uu u soo hogaamiyay xukuumadda iyo si gaar ah howlihii doorashooyinka dalka oo si guul iyo nabad ah ku soo dhamaaday.
Maxaa kuraas cadcad ka macna ah laakiin fariinta waa howl nadiif ah ayaan qabtay. Bax dhex!
Baahane waa maxay ILKA CADEYN BAA KASOO HARTEY INTII DOWLADII HORE DHACDAY.. sababtu waxay tahay waxaa MUQDISHO looga aaminsan yahay in uu BOQORTOOYO/SALDANADII HAWIYE Soo celiyey. Somalida caadigaa inuu yahay MOORYAAN aan nadaam iyo dowladnimo waxba ka ogayn inuu yahay waa arkaan laakiin MOORYAANTIISA HERO/HALYEY HALGAMAY BEY U ARKAAN.
walee roople baahane hawiye waa inay guri kuu dhisaan 5 tii sano ninkii xaniiyaha ka bixinayey meesha waad ka saartay iyo sansibaarka kursiga u tartamaayey dhulka ayaa la goysay madax weyna xasan sheeq waa inow safiir kuu magacaabaa kkkk
Soomaali qabiil baa sharafta ka dilay. Bal reer Puntland boqolkiiba sagaashan waa
ay hariifayaan Raiisulwasaare Rooble oo ah halyeygii ay u wada khushuuci lahaayeen. Weliba Majeeteen oo dhan maahee waa kuwaa qanjirrada ahee laangaabka ah: sida Ibraahiinnada, Warsangeliga, Laakasaha, Awrtablaha, Dashiishaha, reer aan Iswasno iyo reer Haddaan soo degay.
Kuwaa hadda soo qori doona: Leelkase iyo Dashiishe Majeeteen maaha. Dee waa Majeerteen kastuumadiisa.
Majeerteen waa Maxamuud Saleebaan iyo qashin iyo qadhmuun.
U fiirsada qofkan waa kuwii caadifada caanteynka ah ugu xidhnaa qol madow oo ay u bixiyeen waxaasaaya land.
Waar bax cid ku dhegeysanaysaaba iska yare..